जमील वेल्जीका लेखहरू अन Martech Zone |
द्वारा लेखहरू जमिल वेल्जी
जमीलका सीईओ हुन् सजिलो स्वत: बिक्री, एक बिक्री फनेल एजेन्सी। मार्केटिंग, ग्रोथ ह्याकि lead, लीड जेनरेशन र बिक्री र मार्केटिंग अटोमेसनमा उनको विशेषज्ञता अन्तरदृष्टि, छाता मार्फत बिक्री लिने कार्यवाही दृष्टिकोणमा अनुवाद गर्दछ! जमीलसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शीर्ष स्तरको विकास मार्केटि leader नेताको रूपमा +++ वर्षको अनुभव छ। उनका ग्राहकहरू र उनीहरूको बृद्धि सफलताका कथाहरू फोर्ब्स, बीबीसी, टेक क्रन्च र भेन्चर बीटमा चित्रित भएका छन्।
सोमबार, डिसेम्बर 12, 2016 जमिल वेल्जी
यद्यपि स्थिर स्रोतको स्रोत हुनु पहिले नै कुनै व्यवसायको लागि ठूलो चीज हो, यसले प्लेटमा खाना ल्याउँदैन। तपाईं खुशी हुनुहुनेछ यदि तपाईंको बिक्री रिटर्न तपाईंको प्रभावशाली गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टमा समानुपातिक छ। यस अवस्थामा यस कम्तीमा कम्तीमा पनि बिक्री र ग्राहकहरूमा परिवर्तन हुनुपर्दछ। के हुन्छ यदि तपाईं टड्स लिड्स पाउँदै हुनुहुन्छ, तर बिक्री छैन? तपाईं के गर्दै हुनुहुन्न सही, र तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ